Sisengozini ngenxa yedamu elaqhuma
MHLELI: Ngithi angithathe usiba nekhasi ngilobe ngithumele kuwe ukuba usidlulisele kwabangasiza kule nhlekelele. Ngomhla ka 24 Disemba nyakenye kwaqhuma idamu lasemayini iZululand Anthracite Colliery (ZAC) eseMahlabathini njengoba nezulu lina. La manzi anamakhemikhali ayingozi (i-manganese) esetshenzizwa emikhiqizweni yelahle.
Liqhume leli damu langena emfuleni wendawo oseduze uMvalo laze ladlulela eMfolozi. Le mifula isetshenziswa imiphakathi eyakhele imayini kuphuza abantu, kuphuziswe imfuyo kuniselwe izingadi. Umfula iMfolozi usetshenziswa nayisiqiwi iHluhluwe, Imfolozi Park kwimvelo nezilwane.
Le mifula njengoba isingcoliswe yilamakhemikhali ayingozi mukhulu umonakalo odalekile ngoba namanje imayini ayizimisele ukuqhamuka nekhambi lale nhlekelele. Lokhu sikubuka njengetulo lokubulala nokudicilela phansi isithunzi somuntu nemvelo njengoba i-manganese iyingozi empilweni yomuntu, kwimvelo nasemoyeni ophefumulwayo emkhathini kanti kwelinye idamu kwaminza ingane yakhona endaweni.
Sicela uMnyango wokoNgiwa kweMvelo, owokuMbiwa phansi namaGugu, uphiko lwamaLungelo Abantu, noMvikeli woMphakathi bangenele ungaze ube mkhulu umonakalo. Uma imayini iqhubeka iqinisa ikhanda siyocela uMnyango wokuMbiwa Phansi namaGugu uyihoxise imvume yeZAC yokumba noma kube khona abazoshushiswa ngalo monakalo ozoqeda isizwe seNkosi. Ngiyabonga